Mampiavaka ny fifamoivoizana an-dàlana any Bali (SDA) " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Mampiavaka ny fifamoivoizana any Bali (SDA)
Mampiavaka ny fifamoivoizana any Bali. (Lalàna fifamoivoizana)
Bali Road Features
Torohevitra momba ny fanofana fiara
Ny karama any Bali. Ahoana no hisorohana?
Ny fiasa lehibe amin'ny hetsika ao Bali
Ao Bali, toy ny any Indonezia, ary any amin'ireo firenena any atsimo atsimo atsinanana rehetra dia mitohy ny korontana tanteraka eny an-dàlana. Ambonin'izany, ao Bali no tena malaza kokoa noho ny nosy Indoneziana hafa, satria feno lalana ny zotram-pifandraisana eo an-toerana. Ankoatra ny fiara, ny ampahany lehibe amin'ny fitohanan'ny làlana dia miharan'ny lozisialy sy ny tuk-tuks.
Any Indonezia, ny tànan'ny fifamoivoizana no sisa tavela. Hafa be ny toetran'ny arabe. Any amin'ny toerana fizahan-tany, ny kalitaony dia azo antsoina hoe mahafa-po, na izany aza, ny faritra lavitra dia rakotra lalana tsy azo tanterahina, fa tsy lalana aspalety, izay tsy azo andehanana rehefa avy ny orana. Amin'ity tranga farany ity dia mihabe hatrany ny toe-draharaha noho ny tsy fisian'ny famantarana ara-dalana.
Ao anatin'ny faritry ny toeram-ponenana, ny hafainganam-pandeha azo averina dia hatramin'ny 40 km / ora, eo amin'ny lalambe any ambanivohitra - 70 km / ora. Ny lalambe avo lenta dia mamela ny hafainganam-pandehan'ny 100 km / ora.
Eny amin'ny lalana lehibe amin'ny tanàna lehibe indrindra any Bali, matevina be ny fifamoivoizana, hany ka tsy mora ny mandeha haingana. Eo amin'ny làlan'ny firenena dia tokony hitandrina tsara ny fifamoivoizana, satria ny kamiao be sy ny zotram-pizahan-tany matetika no mandeha.
Ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fifamoivoizana, toy ny any an-kafa dia omena onitra, na dia tsy mampatahotra ny mpamily aza izany eo an-toerana izay mitondra fiara araka ny lalàny manokana.
Ho an'ny tsirairay, ny mitondra fiara tsy misy fahazoan-dàlana amin'ny mpamily dia feno lamandy 500 rupees Indoneziana. Ho an'ny mpamily vahiny izay tsy manana zom-pirenena iraisam-pirenena, dia mandoa vola 000 1 000 répart any Indonezia.
Na inona na inona ny fotoana na ny toetrandro, dia tsy maintsy mihetsika ny mpamily amin'ny alàlan'ny fihodinana ireo lohan-tsindranony. Ny fanitsakitsahana an'io fitsipika io dia mitaky onitra 100 000 rupee. Mandritra ny fitsangatsanganana dia tsy tokony ho variana amin'ny fiara ny mpamily. Ny resaka amin'ny telefaona raha mitondra fiara dia feno onitra 750 rupee.
Azo omena lamandy noho ny fitaratra tsy hita izy ireo ary ny fantson-jiro miloko tsy misy fotony. Amin'ny fotoana fihodinana, ho azo antoka fa mamadika ny jiro mazava tsara. Ny fanitsakitsahana ny roa amin'ireo fitsipika ireo dia ny lamandy 250 rupees Indoneziana.
Na izany aza, ny mponina any an-toerana dia mandika ny fitsipika rehetra. Ny resaka an-tariby sy ny fametrahana fiara tsy misy fehikibo seza dia fomba mahazatra, toy ny asa tsy azo ekena.
Mba hitahirizana vola, tsara kokoa ny manisy fiara ao Bali alohan'ny fotoana, herinandro vitsivitsy mialoha ny fitsangatsanganana any Indonezia na volana vitsivitsy monja. Ny toerana manofa trano any Indonezia dia maniry ny haka ny vidiny, raha raisina ny dinamika momba ny lojika anatiny, izay hita ao amin'ny isan'ny fiara mijanona ho an'ny vanim-potoana kaonty.
Ny Convertibles, limousine ary minivans dia tsara kokoa raha jerena ireo teboka misy eo amin'ny seranam-piaramanidina ireo, satria manana safidy isankarazany samihafa noho ny any amin'ny tanàna.
Rehefa nahazo invoice sy antontan-taratasy hafa ho an'ny fiara manofa trano, dia ilaina ny mampitaha ireo vaovao rehetra amin'ny voucher iray. Ny solontenan'ireo toerana fanofana any Bali dia matetika manandrana manampy fiantohana na serivisy safidy nefa tsy mampahafantatra ilay mpanjifa momba izany.
Mila maka ny fiara tsara ianao. Alohan'ny mitondra fiara dia tokony mandinika tsara ny fiara ianao, mijery ny fisian'ny fisianana na ny tsy fisian'ny fatiantoka mba hahazoana antoka fa voamarika amin'ny karatra fanofa trano ny lesoka rehetra misy. Raha tsy izany, dia mila fanitsiana ianao, raha tsy izany dia tsara kokoa ny mandà ny fiara.